Maxaadan ogeyn oo ka soo baxay shirkii Brussels? - BBC News Somali
Image caption Shirkan wuxuu dhici laha bishii Juun, laakinse dib ayaa loo dhigay
Isniintii iyo Talaadadii waxaa magaalada Brussels isugu tegey madaxda Soomaalida (Madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada) iyo wakiillo ka socday dalalka deeqaha bixiya.
Wuxuu daba socday shirar dhowrkii sano ee u dambeeyey ka dhacay magaalooyin kala duwan oo ku yaalla Yurub, sida London, Brussels (shir midkan ka horreeyey) Copenhagen iyo Istanbul.
Waxay ujeedadoodu ahayd in dawladda Soomaaliya lagula xisaabtamo hadba wixii ka hirgala barnaamijyada lagu taageerayo dawladda ee uu dhaqaalaha ku bixiyo midowga Yurub.
Shirka waxaa markii hore lagu tala galay inuu dhaco qaybihii dambe ee bishii Juun, hase yeeshee codsi sida la sheegay ka yimid dhinaca Soomaalida ayaa dib loogu dhigay, ayagoo ujeedada ku sheegay in loo dabaaldegayo maalmaha qarannimada.
Dib u dhacaas wuxuu keenay in wasiirro badan oo shirka u meteli lahaa dalalka deeqaha bixiya aysan ka soo qayb galin shirka dhacay 16-17 Luulyo, taa beddelkeedana ay dalal badan soo direen agaasimeyaal iyo safiirro.
Shirka London ma xallin karaa dhibaatada Soomaaliya?
Shirka Soomaaliya ee London maxaa lagaga hadlayaa?!
Soomaalidana waxaa looga fadhiyey inay tafaasiil ka bixiyaan sidii ay uga soo baxeen ballamihii ay qaadeen.
Labadiiba midna ma dhicin sida ay sheegayaan dadkii shirka ka qayb galay ee ka socday bulshada rayidka.
Image caption Deeq bixiyeyaashu waxay doonayeen inay ogaadaan halka ay martay lacagtooda
"Dawladda Soomaliya waxaa la soo siiyey su'aalo ay u badan yihiin in aysan wakhtigeeda waxba ku darsan karin, inay arrinta amniga xoogga saaraan, inay dedejiyaan nidaamka hay'adaha sharci dejinta, inay hagaajiyaan wada shaqaynta maamul goboleedyada in la dhowro xuquuqda dumarka, in banaanka la keeno dhibaatada musuqmaasuqa iyo dadka samaynaya. Markaa warmurtiyeedka shirka ka soo baxay waa su'aalo la soo weydiiyey dawladda Soomaaliya, waana isla intii lagu weydiiyey shirkii London", Sidaa waxaa yiri Maxamed Caalin oo falanqeeya arrimaha Soomaaliya, kana mid ahaa dadkii shirka ka qayb galay.
Arrimaha ay la yaabeen dadkii shirka la socday waxaa ka mid ahaa in madaxda Soomaalidu aysan la tegin wax qorshe ah oo la taaban karo, marka laga reebo warbixinno ay siinayeen deeq bixiyeyaasha.
"Shir noocaas ah inuu dalka dibaddiisa ka dhaco khalad ayey ahayd, hadduu ka dhacaayana waxay ahayd inuu ka dhaco dal Soomaaliya saaxib la ah. Maamul goboleedyadana iimaan kuma qabaan oo markii dibadda la isugu tago hal qorshe oo Soomaalida ay wadato ma laha. Soomaalida qudheedana caqabadda haysata waa iyaga oo aan heshiis ahayn oo aysan jirin cid go'aanka looga dambeeyo" Sidaa waxaa yiri Dr Ibraahim faarax Bursaliid oo ka faallooda arrimaha gobolka.
Shirka copenhagen oo arrimaha haweenka looga hadlay
Madaxweyne Xasan oo ka hadlay shirka Copenhagen
Shirka Istanbul oo maanta soo xirmaya
Image caption Dad baa qaba in madaxda Soomaalida aysan wax qorshe ah la tegin shirka
Sidaasoo ay tahay waxaa shirka lagu kordhiyey Soomaaliya 200 oo Malyan oo Doollar oo dheeraad ah mashaariicda midowga Yurub uu ka wado Soomaaliya, laakinse lacagtaas ma aha sida la sheegayo mid geli doonta gacanta dawladda Soomaaliya. Waxaa loo soo marin doonaa Qaramada Midoobay.
"Mushaaraadka shaqaalaha dawladda iyo kan ciidanka ayaa toos ugu soo dhici doona akoonka dawladda" ayuu yiri Caalin oo intaa ku daray in dhaqaalaha mashaariicda horumarinta loogu talay iyagana la soo marin doono NGO-yo reer Yurub ah.
Laakin Dr Bursaliid ayaa qaba feker ah in deeq bixiyeyaashu ay marka horeba abuurayaan qaab ay hay'adahooda NGO-yada ah ku hawlgalaan ee aysan si dhab ah ugu danaynayn in mashaariic horumarineed laga fuliyo Soomaaliya.
Arrimaha aan lagala gabban ee la hordhigay madaxda Soomaalida waxaa ka mid ah in "aysan wakhti dheereysi ku fekerin", oo doorashooyinkana "la qabto xilligii loogu tala galay".
Image caption Warmurtiyeedka shirka ka soo baxay ayaa aad ugu dhowaa mid suuqa ku jiray shirka ka hor
Gunaanadkii shirka waxaa ka soo baxay warmurtiyeed ka koobnaa 81 qodob, kaasoo markiisii horeba uu suuqa ku sii jiray mid u dhow oo la sii qoray shirka oo aan la isugu imaan ka hor. Qodobbada qaarkood ayaa u muuqday kuwo wax laga beddelay, ama la kala hor mariyey.
"Tan iyo markii la bilaabay nidaamka geeddi socodka siyaasadda Soomaliya (Roadmap) xilligii dawladdii Sheekh Shariif ilaa maanta beesha caalamka waxay waddaa isla farriimihii ay soo siinaysay Soomaalida, Soomaaliduna isla ka go'naantii ayey muujinayaan, arrintuna halkeedii ayey taagan tahay waana Shimbirayahow heesa, ilaa la helo xukuumad Soomaaliyeed oo ay ka go'an tahay horumarinta dalka, iyo ka go'naan Soomaalida dhinaceeda laga helo oo ay siyaasad ahaan ka heshiiyaanna, waddo iyo wadiiqo kale oo loo baxayo iima muuqato" ayuu mar kale yiri Dr Bursaliid.
Shirkan oo ah mid sannadle ah, ayaa kan la qaban doono sannadka dambe waxaa ka soo horrayn doona mid kale oo dabayaaqada sannadkan ama horraanta sannadka soosocda dhici doona.